IiCinema Palettes Zabelana ngeIconic Umbala wePalettes | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje sinezixhobo ezinomtsalane ngokwenene kwaye oko kusinika ithuba lokuthatha iphalethi yemibala yendawo, ifoto okanye enye yezo bhanyabhanya zonqulo zithandwayo zizigidi zababukeli kwihlabathi liphela.
Ngoku yiakhawunti ye-Twitter eyaziwa ngokuba yiCinema Palettes, ebeka kwi-Intanethi isikimu sombala weemovie ezithile ezaziwayo, phakathi kwazo onokufumana kuzo Ukukhanya nguStanley Kubrick, Mad Ubuninzi: Ukuphuphuma Road nguGeorge Miller okanye UEdward Scissorhands nguTim Burton.
Ithuba elihle lokufumana yeyiphi imibala eyahlukileyo ehamba kuloo foto ekhethekileyo ekwaziyo ukubamba ukujonga kombukeli ngamanye amaxesha ukumshiya epholile, ngaphandle kwakhe ngamanye amaxesha esazi ukuba le mvumelwano yinxalenye yomtyholwa ekudaleni isitampu esithile kwiretina nakwimemori yakhe.
Iifilimu zepeyinti ineetweets ezingama-258 apho umntu ngamnye kuthi anokufumana umbala wombala kwezinye zeemovie ezibonakalayo. Kwimizuzu engama-57 eyadlulayo wabelana ngeskimu sombala I-Django ayibotshwanga ukusuka kwiQuentin Tarantino okanye kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo Lahleka kwi-Translation lifakwe nguSofía Coppola.
Le akhawunti ye-Twitter ingasetyenziselwa ikukhuthaze ngombala wombala ukuba ufuna ukufaka isicelo, iwebhusayithi okanye umsebenzi kumzekeliso wedijithali. Izimvo ziyakhula kwaye zijikeleze zijikeleze ezo 250 zemibala yemibala yemidlalo bhanyabhanya.
Ndikwacebisa ukuba uhambe kolu ngeno apho ungafumana khona izixhobo ezintlanu zewebhu ze Ukukhupha isikimu sombala wawo nawuphi na umfanekiso, ngaphandle kokukhetha ezinye izinto ezijolise kuyilo.
Unoluhlu olupheleleyo lweephalethi ukusuka Iakhawunti ye-Twitter kwaye ndiyakukhuthaza ukuba uthumele i-tweet ukuba ubona into engalibalekiyo ukuze iakhawunti hlaziya uluhlu lwakho kunye nesindululo sakho. Uluvo loqobo kunye nobuchule ngaphandle kwamathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iakhawunti ye-Twitter yabelana ngemibala yeephalethi zemiboniso bhanyabhanya